မူရင်​းစာအုပ်​အမည်​ - The Country of the blind
မူရင်​းစာ​ရေးသူအမည်​ - H.G Wells
ဘာသာပြန်​စာအုပ်​အမည်​ - မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​
ဘာသာပြန်​သူအမည်​ - သခင်​ဘ​သောင်​း
ထုတ်​​ဝေသည်​့ စာ​ပေ- တိုးမြစ်​
ထုတ်​​ဝေသည်​့ ခုနှစ်​ - 2018 ဒီဇင်​ဘာလ(တတိယအကြိမ်​)
​ရောင်​း​စျေး -2000 ကျပ်​
စာအုပ်​​လေးရဲ့ ​နောက်​​ကျောဖုံးမှာပါတဲ့ စာသား​လေးက "မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​မှာ တစ်​ဖက်​လပ်​ဟာ ရှင်​ဘုရင်​"တဲ့။ မျက်​စိနှစ်​ကွင်​းအလင်​းမရတဲ့ လူ​တွေချည်​း​နေတဲ့ တိုင်​းပြည်​မှာ
မျက်​စိတစ်ဖက်​သာ ရှိတဲ့သူဟာ ရှင်​ဘုရင်​လုပ်​လို့ရတယ်​ဆိုတဲ့သ​ဘော...။ "အနူ​တောမှာ လူ​ချော" ဆိုတဲ့ စကားလို​ပေါ့။
အခု ဝတ္ထုတို​လေးက​တော့ အဲ့ဒီစကားပုံ​လေးကို ​တော်​လှန်​ထားတဲ့ သ​ဘောတရားလို့ ထင်​တာပါပဲ။
"တစ်​ခါတစ်​​လေမှာ ကျွန်​​တော်​တို့ မှန်​တယ်​လို့ ထင်​ရတဲ့ အရာ​တော်​​တော်​များများဟာ မှား​နေတတ်​တယ်​ဆိုတာ သတိထားကြ​စေချင်​တယ်​"လို့ ဆရာ​နေဝင်​းမြင်​့က စာ​ပေ​ဟော​ပြောပွဲတစ်​ခုမှာ ​ပြောဘူးပါတယ်​။
အခုဝတ္ထုထဲမှာလည်​း "မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​မှာ တဖက်​လပ်​ဟာ ရှင်​ဘုရင်​"ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ယုံကြည်​တဲ့ စုံလုံးမြင်​(မျက်​စိနှစ်​ကွင်​းလုံး အလင်​းရ​နေသူ)တစ်​​ယောက်​ဟာ ​ဆွေစဉ်​မျိုးဆက်​ ဆယ်​ငါးဆက်​လုံးလုံး မျက်​မမြင်​ဘဝကို ဖြတ်​သန်​း​နေခဲ့ကြတဲ့ မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​ တစ်​ခုကို ​ရောက်​သွားရာက စတဲ့ဇာတ်​လမ်​းပါ။
မျိုးဆက်​ဆယ်​့ငါးဆက်​ အလင်​းဆိုတာ ဘာလဲ... အ​မေှာင်​ဆိုတာဘာလဲ... ​နေ့ဆိုတာ ဘာလဲ... ညဆိုတာ ဘာလဲ....စတာ​တွေကိုသိလည်​း မသိသလို သိလည်​း သိစရာမလို....
ထိုအရာ​တွေကို မသိ​ပေမဲ့ ဘဝကို​တော့ သူတို့​ကောင်​း​ကောင်​းဖြတ်​သန်​း​နေကြတာပဲ​လေ....။ မျက်​စိမမြင်​​ပေမဲ့ သူတို့ အိမ်​​ဆောက်​နိုင်​ကြတယ်​... စိုက်​ပျိုး​ရေးလုပ်​နိုင်​တယ်​... ​မွေးမြူ​ရေးလုပ်​နိုင်​တယ်​...။ သူတို့အတွက်​​တော့ ပြီးပြည်​့စုံ​နေတဲ့ ဘဝ​ပေါ့။
ဒီလိုတိုင်​းပြည်​ကို မျက်​စိနှစ်​ကွင်​း အလင်​းရတဲ့ ဘဲတစ်​​ပွေ ​ရောက်​သွား​တော့... မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​က လူ​တွေကို
​ကောင်​းကင်​​ပေါ်က ကြယ်​​လေး​တွေအ​ကြောင်​း ​ပြောမယ်​...
သူမြင်​​တွေ့ရတာ​တွေ မှန်​သမှျ သူ​ပြော​တော့တာ​ပေါ့...။
မြင်​ခြင်​းဟာ ​ကောင်​းတယ်​...မမြင်​ချင်​းဟာ မ​ကောင်​းဘူး ဘာညာသာရကာ ​တော်​ကီ​တွေလည်​း ပစ်​ချင်​ပစ်​မှာ​ပေါ့။
ဒါကို မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​က လူ​တွေက လက်​ခံမယ်​ ထင်​သလား...?
​နောက်​​တော့ မျက်​စိနှစ်​ကွင်​း အလင်​းရသူဟာ "မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​မှာ ဘုရင်​လုပ်​ဖို့ ကြံစည်​​တော့တာ​ပေါ့...။
မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​မှာ တစ်​ဖက်​လပ်​ဟာ ဘုရင်​လို့ ဆိုရိုးရှိခဲ့တာကိုးဗျ....။
မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​မှာ မျက်​မြင်​ငနဲ ဘုရင်​ဖြစ်​နိုင်​ပါ့မလား?
တကယ်​လို့များ​ပေါ့ဗျာ...ဒီစာအုပ်​ထဲကလို မျက်​မမြင်​တိုင်​းပြည်​ တစ်​ခုကို ခင်​ဗျားတို့ ​ရောက်​သွားခဲ့မယ်​ ဆိုပါစို့...။ ဆိုရိုးစကားထဲက အတိုင်​း အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​ဖို့ ခင်​ဗျားကြိုးစားမလား?
​နောက်​တစ်​ခုက ဒီစာအုပ်​​လေးကို ဖတ်​ရင်​း ပုံပြင်​​လေးတစ်​ပုဒ်​ကို သွား သတိရမိပါတယ်​။
​ရေှး​ရေှးတုန်​းက တိုင်​းပြည်​ကြီးတစ်​ပြည်​မှာ နတ်​​ကောင်​းနတ်​မြတ်​​တွေက ဒီတိုင်​းပြည်​ကြီးမှာ ​နောက်​ခုနှစ်​ရက်​ကြာရင်​ မိုးကြီးသည်​းထန်​စွာ ရွာလိမ်​့မယ်​ ထိုမိုး​ရေကို ​သောက်​မိသူတိုင်​း ရူးသွပ်​သွားလိမ်​့မယ်​ဆိုပြီး လူ​တွေကြား​အောင်​ အသိ​ပေးကြသတဲ့။ နတ်​​ကောင်​းနတ်​မြတ်​ရဲ့ အသိ​ပေးစကားကို တိုင်​းပြည်​ရဲ့ ရှင်​ဘုရင်​နဲ့ ပညာရှိအမတ်​ကြီးနှစ်​ဦးကပဲ ယုံကြည်​ပြီး ကျန်​တဲ့သူ​တွေ မယုံကြည်​ကြဘူး​ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ခုနှစ်​ရက်​ကြာပြီးတဲ့အခါ မိုးကြီးရွာပြီး အဲ့ဒီမိုး​ရေကို ​သောက်​မိကြတဲ့ တစ်​တိုင်​းပြည်​လုံးက လူ​တွေ အကုန်​ရူးကုန်​တာ​ပေါ့။ မရူးတာဆိုလို့ ရှင်​ဘုရင်​နဲ့ ပညာရှိအမတ်​ကြီးနှစ်​ဦးသာ ကျန်​​တော့တယ်​။ ရူး​နေတဲ့ ပြည်​သူ​တွေက ရှင်​ဘုရင်​နဲ့ အမတ်​ကြီးကို ဘာ​ပြောသလဲဆို​တော့ အရူးနှစ်​​ယောက်​လို့ ​ပြောသတဲ့...။
ကဲ..... အခုလည်​း မျက်​မြင်​တိုင်​းပြည်​ထဲ ​ရောက်​သွားတဲ့ မျက်​မြင်​ငနဲသည်​လည်​း ထိုနည်​းတူစွာပါပဲ....။
ဝတ္ထုက တို​ပေမဲ့ ​နောက်​ဆက်​တွဲ ချန်​ရစ်​ထား​ပေးခဲ့တဲ့ ​တွေးစရာ​တွေက​တော့ တစ်​ပုံတစ်​ပင်​ပါပဲ....။
မျိုးဆက်​ ဆယ်​့ငါးဆက်​ မျက်​လုံးကန်​းခဲ့တဲ့ တိုင်​းပြည်​ တစ်​ပြည်​...
အဲ့ဒီတိုင်​းပြည်​ထဲ​ရောက်​လာတဲ့ တစ်​ဦးတည်​း​သော မျက်​စိနှစ်​ကွင်​း အလင်​းရသူ....
စနစ်​ဆိုးတစ်​ခု​အောက်​မှာ နှစ်​​ပေါင်​း ​ခြောက်​ဆယ်​နီးပါး ဖြတ်​သန်​းခဲ့ရတဲ့ တိုင်​းပြည်​တစ်​ပြည်​....